Invitation for Global Myanmar Spring Revolution Walking Rally (12th Sep)(Ended)
Announcements • Sep 8, 2021
今回はRevolution Tokyo Myanmar、We for AllとTTAJ、三つのチームが合体させ、一つの大規模な進行として
※ グーグルのフォーム(Google Form)には、土曜日 (2021年9月11日) の6:00 PMまでに申し込みをお願い致します。
"Calling Ambassadorial War from GMSR”
The new representative Government and Ambassador will be elected by the nations all around the world at 76th UN General Assembly.
Hence to make sure the true voices of People are heard, we Myanmar Citizens from all around the globe will be asking will all our might!
✊🏻 We will be undertaking Global Myanmar Spring Revolution Walking Rally on 12th of September all across the Globe.
Myanmar Ethnic brothers and sisters currently residing in Japan nationwide will also be participating at said Walking Rally.
Three groups (TTAJ , RTM and We for all ) will also be joining as one of the marching groups at Tokyo Rally.
📆 Date - (12-9-2021) Sunday
⏰ Time - 1:30-4:00pm
📍 Gathering Time and Place - Shibuya UN University (Time - no later than 12:30pm)
Kindly fill out the following google form in order to join as volunteers.
Google Form : https://forms.gle/u5AMiYCsZAWgQJaG8
📌Not having party affiliation
we will be wearing all White and red armband, and marching altogether all across the globe, aiming to win this Myanmar Spring Revolution.
Kindly follow these rules and regulations since we will be joining asagroup.
📌 Fill out the Google Form no later than 6pm 11/9/2021 (Saturday).
📌 Please make sure to arrive at the gathering place no later than 12:30pm since we will be departing asagroup.
📌 Please make sure to wear those following outfits as TTAJ volunteers.
Top : White or ethnic cloths
TTAJ will be providing the followings
📌 White Mask
📌 Alcohol Hand Gel
📌 Red armband
📌 Vinyl, Protest Boards
⚠️ If you have any questions on the day, please contact TTAJ members (or) RTM members who will be wearing red strap.
⚠️ Kindly consider yourself not to join at the event if
1. your body temperature is 37.5'C or higher
2. you have any prior diseases such as asthma, heart related diseases.
Our Spring Our Fight
The uprising must win ✊🏻
"သံတမန်ရေးရာတိုက်ပွဲခေါ်သံအဖြစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ"
(၇၆) ကြိမ်မြောက် အထွေထွေကုလသမဂ္ဂ ညီလာခံတွင် စစ်မှန်သော ပြည်သူ့အသံ ရှိနေစေဖို့ NUG အစိုးရအား တရားဝင်အစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုရန် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများမှ အစွမ်းကုန်ကြိုးစား တိုက်ပွဲဝင် တောင်းဆိုကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✊🏻 ဂျပန်နိုင်ငံဒေသအသီးသီးတွင်လည်း ဂျပန်ရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ စုပေါင်း၍ သံတမန်ရေးရာ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် ။
✊🏻 တိုကျို စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် Revolution Tokyo Myanmar - R.T.M, We For All နှင့် TTAJ အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့ စုပေါင်းပြီး စစ်ကြောင်းကြီးတစ်ကြောင်းအဖြစ် ချီတက် ဆန္ဒပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနိုင်ရရှိမယ့် နောက်ဆုံး တိုက်ပွဲခေါ်သံ ဖြစ်တာမို့
📆 နေ့ရက် - (12-9-2021) တနင်္ဂနွေနေ့
⏰ အချိန် - 1:30pm-4:00pm
📍 စုချိန်နှင့်စုရပ် - Shibuya UN University အရှေ့ သပိတ်စစ်ကြောင်း (အချိန် - 12:30 အရောက်)
⚠️⚠️ စစ်ကြောင်းမှာ လာရောက် ပူးပေါင်းလိုသူများ အောက်က Google Form Link လေးမှာ ဖြည့်ပေးပြီး စာရင်းလေးပေးစေချင်ပါတယ် ☺️
ပါတီစွဲမရှိမှု၊ သစ်လွင်မှု၊ ဖြူစင်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုသောအနေဖြင့် အဖြူရောင် All White ဝတ်ဆင်ပြီး လက်မောင်းစည်းအနီရောင်များ ပြုလုပ်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ရေးအတွက် အတူတကွဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ပါ အချက်လေးတွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာပေးစေချင်ပါတယ်။
📌 စနေနေ့ (11-9-2021) ညနေ (၆) နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး Form ဖြည့်ပေးပါနော်။
📌 အဖွဲ့လိုက်သွားရောက်ပူးပေါင်းမှာဖြစ်သည့်အတွက် နေ့လည်(12:30) နာရီထက် လုံးဝ(လုံးဝ) နောက်မကျဘဲ စုရပ်ကို လာရောက်ပူးပေါင်းပေးစေလိုပါသည် ။
📌 volunteerများအနေဖြင့် အောက်ပါ သတ်မှတ်အဝတ်အစားကိုသာဝတ်ဆင်လာပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
⚠️ အပေါ် အဖြူ (သို့) တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံ
အောက်ပါလိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို "Try Together At Japan" အဖွဲ့က ပြင်ဆင်ထားပေးပါမယ်။
📌 လက်မောင်းစည်း အနီရောင်
📌 ဗီနိုင်း ၊ ဆိုင်းဘုတ်
⚠️ ပွဲနေ့ တွင် မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက လည်ဆွဲကြိုး အနီဆွဲထားသော TTAJ အဖွဲ့ မန်ဘာများ (သို့မဟုတ်) RTM အဖွဲ့ဝင်များကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
⚠️ အပူချိန် ၃၇ ဒီဂရီအထက်နှင့် ကိုယ်ခံအားနည်းသူ၊ ရောဂါအခံရှိတဲ့သူများ ပွဲသို့လာရောက်ခြင်းမှ ရှောင်ရှားပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
အောင်ကို အောင်ရမည် ✊🏻